प्रकृति सॅगको साईनो | Chitwan Online Khabar
Posted By: chitwan online khabaron: August 03, 2018 In: मुख्य खबर, विचार
चितवन १८ श्रावण । नारायणी नदि वरपरका मनोरम ठाउँहरु चिरबिर गर्ने चराहरु संगै मसर म संगै केही जिम्मेवारी,कर्तव्य सॅगै सपना पनी जाग्छन् १ पहाडको कुनै कुनाकन्दरामा जन्मे हुर्केको गाउँले केटि का सौख पनि अनौठा छन् ।
मलाई सहरको कोलाहल भन्दा पर रूख बुटबुट्यानको साथ प्यारो र दरो लाग्छ ।
मानव निर्मित मा उस्को आडम्बर र स्वार्थी पन झल्केको महसुस हुन्छ । बस्तीबाट पर माटो को पुणता,सृष्टिको सृजना,बिना तोड मोड बिना कारण, बिना प्रतिस्पर्धा उम्रिन्छ, हुर्कन्छ र फुल्छ बिना मानवीय संरक्षण मा फेरि धर्तिमा बिलीन हुन्छन् ।
ऊ कति निश्चल छ,शान्त छ,सोभ्य छ,पुल्कित छ,पबित्र छ,स्वतन्र छ,परिपक्क छ। रात को अ‍ॅधेरीले त्रसिदैन बिहान उषाको किरण ले मातिदैन ऊ मेरो र हाम्रो अन्नत साथि बन्न सक्छ । प्राप्तिको आशा सुन्य छ उस्मा । मेरो आधा फोक्सो ऊ सॅग आधा म सॅग छ उस्ले फालेको अक्सिजन बाट म जिबित छु । मेरो प्रणको हिस्सा ऊ मेरो जिवन को उमंग ऊ मेरो जिवन को रंङ ऊ अभिन्न अभिछिन् प्रेमिल धरोहर ऊ ।
यस्तै प्रकृति को काख मा केहि समय बेत्तित गर्दै मेरा दैनिकी हरू सुरु हुन्छन् । बिचार को जन्जिर मा बाधिएका हामी दिमाग भरिए पछि एक पछि अर्को गर्दै आकाश को बादल जस्तै मडारिएको हुन्छ । कहिले तुच्छ बिचार कहिले स्वच्छ बिचार ।यहि बिचारको परिबन्ध का सिकारी हामी । कहिले स्वर्ग को अनुभब गर्छौ त कहिले नर्कको मन र बिचार का दाशी हामी बिना ब्रेक का गाडी जस्तै । कहिले यता ठक्कर खान्छौ कहिले उता ठक्कर खान्छौ । कोही यसै ठक्कर बाट बिउझिन्छौ कोही सुषुप्त रूप मा बेहोसी मै सकीन्छौ ।
यस् ब्रम्हाण्डको सानो आस्तु म दैनिक गुजारा को खातिर यता बाट उता उता बट यता दैडिरहेको छु। चारो को खोजी मा म मेरो दैनिकी किनहो कुन्नि अत्यन्तै उर्जासिल र आनन्दित महसुश गर्छु । उषाको किरण सॅगै पन्छिको चिर(बिर आवाज दायाँ बायाँ हरियाली रूख र बुटबुट्यानको सुन्दरता आकाश र क्षितिज को मिलन अनि धर्ति को चमत्कारीता देखेर कुन कबिको मन उत्ताउलो हुन्न होलारु बिषेश गरि यो लमतन्न नृबाद बग्ने नारायणी नदि किनार हुदै जोरकुसुम सम्म ूमनिङ वाकू मा दैनिक भेटहुने यहाँ बरिपरि का प्रकृति आहा म कति भाग्यमानी बिहान को उज्यालो सॅगै मेरा पैतलाले नाप्ने यो भब्य प्रकृति को साचि म आफै हुॅ बसन्त ऋतले हरेक मनमा नयाँ उर्जा,नयाँ जोश,नयाँ आशा,नयाँ सृजना प्रदान गरेको छ। लाग्छ भर्खर योवनमा प्रबेश गरेका मस्त आनन्दित किशोरीका कपालका चुल्ठोमा रंङ्गीबिरङ्गी रिबनहरू फहराई रहेका छन् । राता,पहेँला,निला,सेता कुनै रूख त भर्खर दशैंमा नयाँ घाङर लगाएर सजिएका किशोरी जस्तै लाग्छन् यता । पन्छिहरू फुरूङ्ग छन् । म खेतला दङ्ग हुन्छु ।अस्तित्वको उदुत्त चमत्कार र रहस्य देखेर ।
म अगाडि बढ्दै जादा मेरा पदचापहरु ले छेउ छाउमा उभिएका रूखहरूको मौनता भङ्ग गरे जस्तो लाग्छ । कहिले उषाका किरणहरू रूख र बुटबुट्यानहरू बाट मलाई गिज्याए झैं लाग्छ ।हावाको सुस्त बहाब सॅगै लुकामारी खेलेजस्तै लाग्छ । सुर्य उदाउॅदा र अस्ताउॅदा ऊ आफ्नो गति आकाश को बादल सॅग सरोकार राख्दै न। ऊ धर्तीका आणविक प्रतिस्पर्धाहरु सॅग पनि सरोकार राख्दैन। ऊ चलिरहेछ हरेक प्राणी र प्रकृतिलाई उर्जा र प्राण भरेर । यहि सौर्य गति सॅगै मेरो उमेर मेरो दैनिकी पारस्परिक छ। उसले भरेको ताप र प्रकाश बाट मेरो तन मन र मष्तिष्क को उर्जा निर्धारण हुन्छ । अनि म सुर्य नारायण नमोस्भनेर किन नमस्कार नगरूँ? धर्ती साझा घर हो,आकाश छानो हो ।अन्तत वायुमण्डल को कुनै सिमारेखा छैन । यसै आकाश को अधिपत्य जमाउदै र मेरो गतिलाई चुनौति दिदै पन्छिहरू गति वान देखीन्छन् कुन उध्यस्यमा उड्दै छन् कुन्नि रु मेरा जस्तै जिबन चरण र काम कर्तव्य होलान् । सृष्टिका माग त उस्ले पनि पुरा गर्नु छ।भागेर जाने कुनै ठाउँ छैन लुकाएर लुक्ने कुनै दुनियाँ छैन ।
यसै दुनियाँका म र ऊ पन्छि । सपना र बिपना बिचको अप्रमाणित समिकरण जस्तो सपनाको मिठास र बिपनाको रिक्तता जिवन यात्राका पानाहरू हुन् । बेहोसी रहर मा देखीएका सपना र होस् मा भोगिएका जिबन तिम्रो र मेरो जिबनकथा हुन् । गुण,चारो,सन्तान,रहर,चाहाना,यथार्थ बिचको खिचातानी जिबन कथाहा का हरपहरु हुन् । जति हेरे पनि आनन्द प्राप्त हुने प्रकृतिको अनुपम दिव्यलाई अबलोकन गर्दै बिहान को केहि समय मात्र आफ्नो निमित्त बिताउन पाउँदा आफु भाग्यमानी ठान्छु १ तिम्रो सुन्दरता मा नतमस्तक छु।
तिम्रो गर्भबाट उत्पादित म फेरि तिम्रै गर्भमा बिलिन हुनेछु। यो जन्म र मृत्यु बिचको रङ्गमञ्च तिम्रै शुभास र निश्चलता अंगाल्दै मेरो नाटकिय रोल निभाउदै छु !
नारायणी नदिमा पानिको प्रबाह नदिको किनारलाई छोड्दै बिशाल समुन्द्र को प्यास मा आतुर छ । करिब उस्तै म त्यही सुन्दर बिहानीको यात्राको हतारमा बिउझिन्छु र विराट अस्तित्वको दृश्य अबलोकन तर्फ आतुर हुन्छु ।
जसरी आतुर छ नदि समुन्द्र छुनलाई म पनि तै नदि जस्तै विराट जिबन को रहर मा बिउउॅझिने कोशिसमा छु। मुर्छित मन ले त केवल दुर्दशा अनि कष्टको निमन्त्रण दिन्छ । चेतना ले भरिपूर्ण मन ले लक्षित गन्तब्य मा पुरॉउ छ । हो म एक साक्षि अस्तित्वमा एकाकार हुने लक्ष बोकेको शुन्यता खोज्दै मन बिलिन गराउने रहर मा बाचेको म !
घुमाउनेमा पहिरो : नारायणगढ­– मुग्लिन सडक अवरुद्ध